အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုမှ ချစ်သူတော်သင့်တဲ့ အချက်များ – MM File
သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ဆိုတာဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားတန်ဖိုးရှိပါတယ်။တခါ တလေမှာ ကိုယ်ရှာနေတဲ့အချစ်က အဝေးကြီးမှာမရှိပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အနီးအနားမှာပဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။အဝေးကြီးရှာစရာ ကြည့်စရာမလိုပဲ နီးနီးလေးမှာရှိတဲ့ သံယော ဇဉ်က နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Romantic ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူတော်သင့်တဲ့အကြောင်း အရင်းတွေကတော့….
တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် အတွင်းကျကျ တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းသိထား ပြီးဖြစ်တာကြောင့် တကူးတကလေ့လာနေဖို့မလိုပါဘူး။ကိုယ့်မှာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေရှိနေရင်တောင် သိထားပြီးသား လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်ပြီးသားပါ။
သူငယ်ချင်းနဲ့တွဲရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကတော့ အရမ်းကောင်းနေမှာပါ။အရင် တည်းက အရာရာကိုအတူဝေမျှခံစားလာဖြစ်တာကြောင့် အထူးညှိနေဖို့မလို ပါဘူး။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်၊အစားအသောက် အစရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို သိထားပြီး လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အတူ Sharing လုပ်ရာမှာ တခြားတစိမ်းလူထက် အများကြီး ပိုအဆင်ပြေ လွယ် ကူမှာပါ။ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း ကိုလည်း တစ်ယောက်က သိပြီးဖြစ်တာကြောင့် အထူးဖုံးကွယ်ရှင်းပြနေဖို့ မလိုပါဘူး။
ဒါကလည်း သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူတော်ရင် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲက တစ်ခုပါ။တစ်ယောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို တစ်ယောက်က သိထားပြီး သားဖြစ်တာကြောင့် တကူးတက မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုသလို၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝင်ဆံ့နိုင်ဖို့ ရင်းနှီးလာဖို့ကိုလည်း တကူးတကကြိုးစားစရာမလိုပါဘူး။
Read >> ဈေးကြီးပေမယ့် သုံးစားမရတဲ့ ပစ္စည်း ၁၀ ခု
ကိုယ်ဘာကိုကြိုက်တယ်၊မကြိုက်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုအပြုအမှုတွေ ဘယ်လို အရာတွေ က ထိခိုက်နာကျင်စေသလဲဆိုတာကို သိထားပြီးဖြစ်နေ မှာပါ။ဘယ် လိုအရာေ တွက ကိုယ့်ကိုစိတ်မလုံခြုံစေမယ်၊၀မ်းနည်းစေမယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း တကူး တကပြောနေစရာမလိုပဲ အလိုလိုနားလည်ထားပြီးဖြစ်နေမှာပါ။
အချိန်အကြာကြီးသူငယ်ချင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုတည်းက ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံး ပုံစံတွေ(ဥပမာ-မျက်နှာမသစ်၊မိတ်ကပ်မလိမ်းထားတဲ့ပုံ)တွေကိုမြင်ဖူးတွေ့ ဖူးပြီးဖြစ်နေမှာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုတောင် သိထားတွေ့ထားပြီးဖြစ် တာတောင်လက်ခံပေးနိုင်ပြီးသားလူဖြစ်တာကြောင့် အချစ်ကလဲ ပိုခိုင်မြဲနိုင်ချေ များပါတယ်။
သူငယျခငျြးသံယောဇဉျဆိုတာဟာ တကယျ့ကို ထူးခွားတနျဖိုးရှိပါတယျ။တခါ တလမှော ကိုယျရှာနတေဲ့အခဈြက အဝေးကွီးမှာမရှိပဲ ကိုယျ့ရဲ့ အနီးအနားမှာပဲ ရှိနနေိုငျပါတယျ။အဝေးကွီးရှာစရာ ကွညျ့စရာမလိုပဲ နီးနီးလေးမှာရှိတဲ့ သံယော ဇဉျက နှဈဦးနှဈဖကျအတှကျပြျောစရာကောငျးတဲ့ Romantic ဇာတျလမျးလေး တဈျပုဒျဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။သူငယျခငျြးကို ခဈြသူတျောသငျ့တဲ့အကွောငျး အရငျးတှကေတော့….
သူငယျခငျြးနဲ့တှဲရတဲ့စိတျခံစားခကျြကတော့ အရမျးကောငျးနမှောပါ။အရငျ တညျးက အရာရာကိုအတူဝမြှေခံစားလာဖွဈတာကွောငျ့ အထူးညှိနဖေို့မလို ပါဘူး။ကိုယျကွိုကျတဲ့ရုပျရှငျ၊အစားအသောကျ အစရှိတဲ့အရာတှအေကုနျလုံးကို သိထားပွီး လကျခံထားပွီးသားဖွဈတာကွောငျ့ အတူ Sharing လုပျရာမှာ တခွားတစိမျးလူထကျ အမြားကွီး ပိုအဆငျပွေ လှယျ ကူမှာပါ။ဒါ့အပွငျ တဈယောကျရဲ့အတိတျကဇာတျလမျးတှအေကွောငျး ကိုလညျး တဈယောကျက သိပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အထူးဖုံးကှယျရှငျးပွနဖေို့ မလိုပါဘူး။
Read >> သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် ပြောင်းလဲသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနေတဲ့ အချက် (၄) ချက်
ကိုယျဘာကိုကွိုကျတယျ၊မကွိုကျဘူးနဲ့ဘယျလိုအပွုအမှုတှေ ဘယျလို အရာတှေ က ထိခိုကျနာကငျြစသေလဲဆိုတာကို သိထားပွီးဖွဈနေ မှာပါ။ဘယျ လိုအရာေ တှက ကိုယျ့ကိုစိတျမလုံခွုံစမေယျ၊၀မျးနညျးစမေယျဆိုတာတှကေိုလညျး တကူး တကပွောနစေရာမလိုပဲ အလိုလိုနားလညျထားပွီးဖွဈနမှောပါ။